Degdeg:- Puntland oo gobolka Sanaag ku xidhtay masuul xil sare kahaya Somaliland + Sababta xarigiisa. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDegdeg:- Puntland oo gobolka Sanaag ku xidhtay masuul xil sare kahaya Somaliland + Sababta xarigiisa.
September 11, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 7
Ciidamada Amaanka Puntland ee ku sugan Degmada Baran ee gobolka Sanaag ayaa maanta xiray Cabdiraxmaan Axmed Muuse Suldaan Suus guddoomiye kuxigeenkii Somaliland u qaabilsanaa gobolka Baran, xariga Cabdiraxmaan ayaa yimi ka dib markii uu diiday in uu ka tanaasulo xilka uu u hayo Somaliland isla markaana uu ku biiro Maamulka Puntland.
Weriyaasha ayaa goordhaweyd looga yeedhay goobta lagu hayey guddoomiye kuxigeenka balse markii uu diidday in uu tanaasulo ayaa la fasaxay saxaafadda.
Puntland ayaa mudooyinkii danbe xoojinaysay saamaynta siyaasadeed ee ay ku leedahay Gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran, dhawaan waxaa gaaray deegaanadaas in ka badan 10 wasiir, waxaana degmada Baran loo dhisay gole deegaan oo cusub. sidoo kale taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland Gen Yaasiin Cumar Dheere ayaa dhankiisa socdaalka kala duwan ku tagay Gobolada Sanaag iyo Hayland
“DADKAAGA DHINAC KA RAAC YAADAN DHUMINE”(Xildhibaano)?..
1)Iidoor: Hadba reerka doorkaa sharaxan maxaa hadiyad kuu siiyay?.. ninyahow?
2)Ninyahow: Hanti lagu xisaabtamo maxaa heedhe kaa dhigaya?…
Viva Ha guulaysteen halgan key wadaan horumar weeyaan’e(Harti)?
Jubblandstate”:Farmaajo”-Haybta nimaad ka siman tihiin maxaa hoosta kaa mariya?..
1)Haybta nimaad ka siman tihiin maxaa hoosta kaa mariya?..
2)Mareexaan”; Ma hayaan hankii laga rabiyo horumarkoodiiye(Kismaayo)?
Ha guulaysteen kuwii nala fahmay hogol tusaalaynta
Ha guulaysto ka hareerta kaga soo dhacee hawsha nala riixay
Ha guulaysto ka hindisaha uu qabo hadal ku soo dhiibtay
Ha guulaysto midka aan hagranin shillinka loo baahdo
Baran waa magaalo soomaaliyeed,laakiin beel soomaaliyeed baa u badan.Ninkii la qabsan waaya beeshaas waa nimaan doonayn wanaaga beesha.Nimaan doonayn wanaaga beesha waa in uu meel kale jaaha saaraa.Ninka la yiri waa la xiray oo waxuu matalayey hargeeysa,war meeshu waa Baran oo ma aha hargeeysa ee fur indhaha iyo dhagaha.
Asc wr wb midkaan la qabtay ee dabadhilifka u ahaa beesha isaaq oo dadkiisa rabay inuu ugumeeyo faysal Cali waraabe dhaban madoowe iyo miuse shaani hala dilo. Kii isaaq ah ee Lagu qabto dhulka puntland ee soo gala isaga oo ah weerar duafoorka ka toogta. Adeer meedha puntland ma ahan dhul isaaq waa inaad haddaa imaadaan puntland aqlaq iyo anshax ku imaadaan.
asc Atoore io mingistume
horta inkastoo aanan markasta soo gelin meeshan marqaan hadana waxaan arkaa in ee ka huleeleen reer s land kkkkk macnah a waxan umaleen ineey forjoobeen oo laga badiyay! wiilashii QAXWAHA KU SAXAN JIRAY xagee kabaxeen? KKKKK sida Ahmed snm io saxiibadiis?
wiilkaan reer Sanaag ah waa n xabsiga lagu hayo ilaa uu kasoo rujuucayo weliba waxeey aheeyd in marhore sidaan lasameeyo oo wixii kashaqeeya dhibaatada dadka io deegaanka oo kala faquuq io kala qeeybin loo soo adeegsado xabsi ladhigo well done Puntland illen ayagaba meelaha eey kataliyaan Puntland lug madhigi karaane!
MIDNIMADA SOMALILIA WAA MUQADAS MARKA LAGA SOO TAGO DIINTA ISLAMKA IO QURAANKA WBT. SOMALIA HANOOLAATO AAMIN
KU:Gabar Harti Ismaaciil Jabarti.
salaam kabacdi dadkaad sheegtay way quusteen oo ay ka quusteen in aysan macquul ahayn waxa ay u bixiyeen Jamahuuriyda soomaalilaan.soomaalilaan waa dal iyo dad jira oo an la inkiri karin.Laakiin soomaalilaan waa gobal ka mida maamul gobaleedyada soomaaliweeyn.Reer soomaalilaan markii horeba waxaa qalday niman dano gaara watay.Haddase runtii bay soo taabteen oo waxay arkeen in aysan ka maarmin soomaali inteeda kale.Sababtoo ah haddii mashruuc loo hirgalinayo waa in ay soomaaliweeyn u saxiixdaa.Haddii ay XAJKA adayaan ama ay meelo ka muraad leeyahiin waxay qaataan ama ay haystaan somali pass ports.Waxba ku waaye jamahuuriyada soomaalilaan.Waxayse wax ku helaan maamul gobaleedka soomaalilaan.
Calaa kulli xaal gobalkaasu waa gobal ka mida soomaaliweeyn.One Somali One Nation.
Umadaan maxay yihiin, wada dabadhilifka ah, dadka meesha degani iyo maamulku haka sifeeyaan waxaan, hadba mid miyaa idoor Calankii qabuuraha wadaada suufiyiinta ka taagi jireen, ay u soo gelinayaa. war xishooda oo maamul baad leedihiine is raaca oo wax noqda. ama orda cashuur Hargeysa u aruuriya.